अाेबीसीए अमेरिकामा रहेका सबै भूटानीहरुको संस्था बन्न अझै सकेको छैन ! | www.aagopati.com Websoft University
अाेबीसीए अमेरिकामा रहेका सबै भूटानीहरुको संस्था बन्न अझै सकेको छैन !
लेखक -(हेम गिरी)
अमेरिकामा रहेको भूटानीहरुको संस्था भनेर विश्वभर चिनाउन बडो गजबको साथ लागिपरेको एक संस्था हो अर्गनाइजेसन अफ भुटि्नज कम्युनिटिज इन अमेरिका (अाेबीसीए) ! सो संस्थाको सातौ राष्ट्रिय अधिवेशन अमेरिकाको नेब्रास्कामा यहि वर्षको जुलाई २८ देखि ३० तारिकसम्म आयोजना हुने तयारीमा छ । उत्त संस्था अमेरिकामा रहेका नेपाली भाषी भूटानीहरूको राष्ट्रिय संस्थाको रूपमा स्थापित हुन सक्छ सक्दैन त्यो अहिले नै निर्णय गर्न सक्ने विषय भएन तर, यति भन्छु यो संस्थालाई अमेरिकामा रहेका भूटानीहरुको राष्ट्रिय अनि छाता संस्था भन्न धेरै छिटो गरियो ! मलाई सधै एउटै प्रश्न आइरहन्छ, त्यो हो:- यो संस्थाले आईओएमको झोला बोकेर अमेरिका आएका भूटानीहरुको मात्र कुरा गरेको सुन्छु, कुरा मात्र गरेको ! काम के कस्तो भयो त्यो पनि हेरेको छौ ।
मेरो प्रश्न यो हो कि के अमेरिकामा आईओएमको झोला मात्र बोकेर आएका भूटानीहरु छन् त ? आईओएमको झोला नबोकी अमेरिका आएका भूटानीहरुको कुरा गर्न किन सक्दैन यो संस्थाले ? कुरा यो हो ! भन्न चाहि अमेरिकामा रहेका सम्पूर्ण भूटानीहरुको साझा संस्था भन्ने अनि कुरा गर्दा चाहि आइओएमको झोलाको मात्र कुरा गर्दिने ? आईओएमको झोला बोक्ने र नबोक्ने कुरा कसले निकालेको हो त्यो एकदम गलत तरिकाले निकालेछन, अमेरिकामा रहेका सबै भूटानी त्यहि झोला बोकेर आएका छैनन् भन्ने कुरा पनि थाहा हुदैन र भन्या ?
यो लेख कुनै पुर्वाग्रही होइन, कुनै रिस होइन, कुनै आक्रोस होइन, कुनै गुनासो होइन । अमेरिकामा रहेको एक भूटानी भएको कारण आफ्नो संस्थाप्रति आफ्नो कुरा राख्न मात्र खोजेको हुँ । संस्थाको सातौ राष्ट्रिय अधिवेशनको सफलताको शुभकामना प्रदान गर्दै केहि कुरा लेख्न खोजें ! अाेबीसीएले आफ्नो सातौ राष्ट्रिय अधिवेशन आयोजना गर्न लागिरहेको यो समयसम्म आइपुग्दा पनि आफ्नो सबै जानकारी कुनै आधिकारिक फेसबुक पेज या वेवसाइटमा राखेको छैन । यो एकदम बिडम्बना हो । अमेरिकामा रहेका भूटानीहरु सामाजिक संजालमा निक्कै सक्रिय छन्, अमेरिकामा कसैले एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्दा त पुरा सामाजिक संजाल भरिन्छ तर, यो संस्थाले स्थापनकालदेखि अहिलेसम्म यो विषयमा केहि नापेको छैन । हामीले संस्थाको विषयमा बुझ्नु पर्दा संस्थाका मान्छेलाई फोन गर्नै पर्छ ! याद रहोस अमेरिकामा रहेका सबै भूटानीहरुले संस्थाको कुरा बुझ्नको लागि संस्थाकै मान्छेलाई फोन गर्छन भन्न सकिन्न , त्यसैले सामाजिक संजालमा संस्थाले आफ्नो कुरा राख्नु पर्थ्यो, अब यो विषयलाई नम्बर १ मा राखेर काम गर्दा हुन्छ । संस्थाले आफ्नो विधान परिमार्जन गर्दै जाने बताउदैछ तर, त्यो विधान सबैले हेर्न पाएका छन् या छैनन् त्यो महत्वपुर्ण विषय हो । हेर्न पाउँछन् या पाउँदैनन ? त्यो जानकारी होस् ? हेर्न पाउँछन् भने कहिले के मार्फत हेर्न पाउँछन् ? त्यो भन्नै पर्छ नभने पनि विधान सम्बधी जानकारी दिनु पर्छ । राष्ट्रिय संस्थाको रूपमा स्थापित हुन खोजिरहेको सो संस्था अहिलेसम्म कतै दर्ता भएको छ या छैन अनि राष्ट्रियव्यापी रुपमा के के कार्यक्रम गरेको छ ? हामीलाई थाहा हुन नसकेको हुन सक्छ तर, अहिलेसम्म एउटा पनि सुनेको छैन । त्यो सबैलाई जानकारी हुनु पर्छ ! संस्थाका उपाध्यक्ष दिलिप दाहालले नेपाल गएर नेपालका पुर्व प्रधानमन्त्री के.पी ओलीलाई भेटेको देखियो ! त्यसैलाई नै संस्थाले ठुलो सफलता मानेको पनि देखियो तर त्यो नै ठुलो सफलता होइन ! अमेरिकामा भूटानी समाजबाटै आत्माहत्या रोकथाम नामक जनचेतनामुलक कार्यक्रम भयो, हिमालयन फेस्टिभल हुँदैछ ! हिमालयन फेस्टिभल अमेरिकामा रहेका सम्पुर्ण नेपाली भाषीहरुको कार्यक्रम हो तर, गर्व साथ भन्छु आयोजक समितिका धेरै सदस्यहरु भूटानी नै हुन । अमेरिकामा रहेका भूटानी कलाकारहरुको कला, साहित्य अनि खेलकुदलाई बिकास गर्ने कार्यक्रम धेरै आयोजना भएको छ तर, यस्तो कार्यक्रममा अाेबीसीएको कतै कति पनि सहभागी देखिएको छैन तर पनि सो संस्थाले अमेरिकामा रहेका सम्पुर्ण भूटानीको संस्था हो भन्न अहिलेसम्म छोडेको छैन । नेपाली भाषी भूटानी कलाकारहरुको सहभागी गराएर एउटा चलचित्र चाहिं निर्माण गरेको थियो होला । मेरो असहमत संस्थालाई सम्पुर्ण भूटानीहरुको संस्था हो भन्ने कुरामा होइन तर, संस्थाको काम कारबाहीले सबै कुरा बताएको छ । भन्ने भन्दा पनि गर्नेहरुलाई सम्मान गरिनु पर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ । अर्को कुरा, अाेबीसीएका पर्व अध्यक्ष ज्यूहरू कहाँ छन् ? प्राय संस्थाका पर्व अध्यक्षहरू आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि त्यहि संस्थाका सल्लाहाकारको रुपमा बसेको देखिन्छ तर, यहाँ त्यो देखिएको छैन ! संस्थाले नेपालको शरणार्थी शिविरमा फुटबल आयोजना गर्नको लागि प्रयोजन गरेको थियो त्यहि विषयलाई ठुलो विषय ठानेको होला, गर्न त ओहायोको एउटा होम कियरले पनि फुटबल प्रतियोगितालाई प्रायोजक गरेकै थियो ।
अाेबीसीएको पाचौ राष्ट्रिय अधिवेशनको झलक
अाेबीसीएले अहिलेसम्म के गर्न सकेको छ भनेर सोधियो भने उत्तर आउछ नेपालमा रहेको भूटानी शरणार्थीको विषयमा युएनएचसीआर अनि नेपाल सरकारसँग विशेष कुराकानी गरिरहेको छौ । मेरो प्रश्न अमेरिकामा रहेका भूटानीहरुको विषयमा संस्थाले अहिलेसम्म के गरेको छ ? संस्था कुन ठाउँमा रहेका भूटानीको निम्मित स्थापना भएको हो ? नेपालका शिविरमा रहेका भूटानी शरणार्थीलाई केहि नगरौ भन्ने मेरो कुरा होइन, गर्ने नै हो भने विश्वभरि नै रहेका भूटानीहरुको विषयमा वकालत गर्दा झनै राम्रो हुने हो तर यहाँ त्यो भइरहेको छैन । लिने होइन दिने बेला भयो भन्ने अध्यक्ष ज्युको संस्थाले फुटबलमा पैसा दिन बाहेक अरु कुन कुन ठाउँमा के के दियो ? त्यो बुझ्न अनि हेर्न चाहन्छौ ! अाेबीसीए संस्थाले एक दुई जनालाई चिनाउने मात्र काम गरेको जस्तो देखिन्छ यसले राम्रो सन्देश दिदैन ! मेरो असहमती यति मात्र हो संस्था छ, हल्ला धेरै नगरौ काम गरौ भन्ने हो ! यहाँ संस्था छाता अनि के के संगठान भनिरहेको सुनिन्छ, त्यो भन्ने होइन पछि आफै हुने हो तर काम चाहिं देखिनु पर्छ । संस्थाको दुनियाँले आलोचना अनि विरोध गरेको राम्रोसँग देख्छु, आलोचनालाई संस्थाका सदस्यहरुले कसरी लिन्छन त्यो थाहा भएन तर, बहिरा बसेर अरुको गल्ति मात्र देख्नु पनि पाप काम हो । संस्थाको कमिकमजोरलाई न्युनिकरण गर्नको लागि त्यस्ता मान्छेहरु संस्था भित्र जानु नै पर्छ । मुख्य कुरा त संस्था अमेरिकामा रहेका भूटानीलाई जुरुर छ कि छैन भन्ने हो ! छैन भने भैगो, छ भने सबै मिलेर बस्नै पर्छ । संस्थाका हालका सदस्यहरुले पनि मन ठुलो पारेर अरुलाई संस्थामा स्वागत गर्नै पर्छ । हालका सदस्यले जति गर्न सक्थे गरिसके अझै यसमा धेरै गर्नु छ त्यो अहिलेकाहरुले गर्न सक्छन जस्तो लागेको छैन त्यसैले सबै आलोचना अनि बिरोध गर्नेहरु पनि एक थलोमा बस्नु जरुरी छ । अन्त्यमा यति भन्छु, संस्थालाई सफलताको शुभकामना ! संस्था अमेरिकामा आइओएमको झोला बोकेर आउने भूटानीहरुको मात्र संस्था नबनोस आइओएमको झोला नबोकी आउने भूटानीहरुको पनि संस्था बन्न सफल होस् अनि छाता र राष्ट्रिय संस्थाको कुरा गर्दा ठिक होला !